Shina: Rafitra fanamarinana ny mombamomba ny olona (ID) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Septambra 2010 3:43 GMT
Miady hevitra momba ny fametrahana ny tena anarana ao amin'ilay sehatra fitorahana bilaogy kiritiky ny Baidu, Baidu Shuoba, ireo mpitoraka bilaogy sy mpandefa bitsika (twitterers). Maro no miahiahy fa i Baidu, lohamilina fikarohana lehibe indrindra ao Shina, dia mifampitohy amin'ny raki-tahirin'ny governemanta (government ID Data base), satria ny fanamarinana ilain'ny Baidu Shuoba dia mitaky feno ireo rehetra mombamomba ny nanarana sy ny laharan-karapanondro.
WL: Tena maharikoriko i Baidu Shuoba, tsy maintsy mampiditra ny laharan-karapanondronao ianao rha te-hanokatra kaonty. Fa polisy ve ry zareo e? Raha miparitaka ny mombamomba ny olona tsirairay? Iza no hibaby ny andraikitra? Raha misy olona mampiasa ny mombamomba ny hafa mba hanatanterahana heloka bevava eto amin'ny aterineto, iza no hipetraka ho mpanara-maso?
WL: Tena miavaka tsara ny rafitra fanamarinana ao amin'ny Baidu Shuoba, azo eritreretina ny fisian'ny fifampitohizany any ambadika any amin'ny raki-tahiry faoben'i Shina. Ilay izy dia mitaky feno ny laharan-karapanondro ka hatramin'ny anaran'ny mpampiasa azymba ho fanamarinana. Miara-miasa akaiky amin'ny governemanta ny Baidu amin'io. Tsy izay ihany, tsy manaraka eo fotsiny ihany ny olona, vantany vao misy fifandraisana amin'olona akaiky anao dia azon'ilay mitsongo dia koa ny laharan'ny findainao.
Zhengyun, manampahaizana iray hafa amin'ny IT, no ndray ilay adihevitra ka nampivoitra fa Baidu, toy ny ankabeazan'ireo lohamilina fikarohana hafa ao an-toerana ihany, dia efa nifampitohy hatrany tamin'ny GFW, fanivanana napetraky ny Ministeran'ny Indostria sy ny Teknolojian'ny Fifandraisana [Ministry of Industry and Information Technology (MIIT)]. Hoy ny teniny ao amin'ireo bitsika nalefany:
Zhengyun: Toa sahala amin'ny marobe ny risika momba ny fahalemana (security) ao amin'ny Baidu Shuoba. Mandroso hevitra ho an'ireo namana eo amin'ny tontolon'ny IT aho tsy hanaotao foana sahala amin'ny voalavo fotsy. Satria ho an'ireo mafana fo amin'ny fiarovana ny zon'olombelona, minitra vitsy monja no isaina dia hitan'ny polisy ianareo.
Zhengyun: Ny lohamilina fikarohana an'ny Baidu dia manana fifampitohizana amin'ny MIIT, izay mandray irao teny mafampàna ary manampy amin'ny fijerena raha araka ny lalàna ny valin'ilay fikarohana. Io fifanarahana manokana io dia fitakiana nalefan'ny MIIT tamin'ireo lohamilina fikarohana rehetra tazonin'ireo kaompania ao Shina. Na dia ny Google sy ny Bing aza dia nasaina nanaraka azy ireny. Ireo teny mafampàna sy ny lisitra mainty dia ny MIIT avy hatrany no manara-maso azy.
14 Mey 2021Azia Atsinanana